Bariga Dhexe ma ka hortagi kartaa xagjirnimo? - BBC Somali
Bariga Dhexe ma ka hortagi kartaa xagjirnimo?
Magdi Abdelhadi oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa fikradiisa ka dhiibanaya dhibaatooyinka horyaala in la xaliyo xagjirnimada Bariga Dhexe.
Haddaad daawato telefishinka Sacuudi Carabiya, oo aan mar mar daawado waxaad durbadiiba ogaanaysaa in Sacuudi Carabiya ay u dhaxayso sumcadda ay rabto caalamka inay tusto iyo runta meesha taala.
Kadib markii Wasaarada Arrimaha Gudaha ay ku dhawaaqday inay qabatay dad xiriir la leh IS ama Daacish oo ay xirtay afar boqol oo qof. Wariyayaasha Sacuudiga ayaa ammaanay boliiska siday uga hortageen weeraro argagixiso, waxayna sheegeen sida ay da'dooda u yar tahay dadka laxiray oo badankood u dhashay Sacuudiga.
Waxay ka hadleen sidii Sacuudiga uu ugu soo celin lahaa dhalinyarada lunsan islaamka dhabta ah, oo looga soo celin lahaa xagjirnimada.
Hadalka isqilaafsan ee meesha ku jira ayaa ka fakanayn qof walba oo Sacuudiga si fiican u yaqaana.
Image caption Weerar lagu qaaday masaajid Shiica ee Dammam.
Siday boqortooyadan Sacuudiga ee xirxiran ay ula dagaalee xagjirnimada marka Islaamka ay haysato ee loo yaqaan Wahhabi uusan ka duwanayn midka mintidiinta Suuriya iyo Ciraaq ay isticmaalaan?
Labadoodaba waxay ku dhaqmaan in la kala saaro ragga iyo dumarka, in dumarka qasab looga dhigo inay is dadaan madaxa ilaa lugaha, dadka in meel fagaaro ah lagu dilo iyo nacayb loo qabo Shiicada muslinka iyo noocyada kale ee Islaamka.
Waxay kaloo wadaagaan Sacuudiga iyo mintidiinta Suuriya iyo Ciraaq, nacayb diinta Kiristaanka iyo Judismka, kuwaasoo ah laba diin oo Bariga Dhexe oo ka horeeyay Islaamka, dadka Islaamka sida uu Quraanka qorayo waa inay xushmeeyaan oo ay ilaaliyaan.
Image caption Weerar lagu qaaday masaajid ku yaala Qatif.
Sacuudi Carabiya ma aha oo kaliya meeshii uu Islaamka ku dhashay, waxay sidoo kale u isticmaashay lacagteeda shidaalka inay u dhoofiso nooca diinta ay aaminsan tahay adduunka oo dhan - ilaa Pakistaan, Afrika iyo Muslimiinta Yurub iyo Amerika.
Su'aasha ah in lala dagaalo mayal adagnimada ayaa mar kale xooga la saaray, taasoo ah dhib hore oo jiray sidii looga hortagi lahaa mayal adagnimada iyadoon wax loo dhimin dimoqraadiyada aad difaacaysid.
Dhibaatada waa mid ka sii adag dunida muslimka sida Bariga Dhexe.
Bariga Dhexe, mayal adagnimada IS ama Daacish ayaa dhalisay in su'aalo la iswaydiiyo: Yaa lagu eedaynayaa dhibkan la gaysanayo iyadoo la isticmaalayo magaca Islaamka?
Waa dhaqdhaqaaq Islaam faafin ah oo ka timid gacanka Arabia qarnigii 18-aad.
Sida faafino badan taariikhda Islaamka, Maxamed Ibn Abdul-Wahhab, oo ah ninkii aasaasay dhaqdhaqaaqa, ayaa dareemay Islaamka dadkiisa ay haystaan inuusan ahayn kii ugu horeeyay.
Wuxuu ka soo horjeeday sida dhaqanka ah ee loo fasiray buugaagta Islaamka, oo ay ku jirto xadiithka, isagoo su'aal ka keenay sida dhaqanka ah ee runta ay culumadii hore ugu gudbiso kuwa cusub.
Waxaa lagu badalay in su'aal laga keeno waxa ay culumada sheegeen inay la mid tahay sidii hore ee Quraanka dadka loo baray.
Waddanka Sacuudiga ayaa ku dhisan isbahaysi ka dhaxeeya diinta qarnigii 18-aad ee dhaqdhaqaaqa Wahhabiga iyo Aqalka Saud (House of Saud) oo ah reer u taliya Sacuudi Carabiya tan iyo markii la aasaasay 1930 meeyadii.